S20 စီးရီးသစ်အထူးသံမဏိ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အစိမ်းရောင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေမီးအိမ်ပစ္စည်းများ,နယူးလမ်းမီးပစ္စည်း,Streert မီးအိမ် Post ကိုပစ္စည်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > လမ်းမီးစီးရီး > နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း > S20 စီးရီးသစ်အထူးသံမဏိ
ယခုအသစ်အထူးသံမဏိကြောင့်အများအပြားအသစ်သောအားသာချက်များရှိပြီးရိုးရာလူမီနီယံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဆီမီးခွက်ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းသစ်တစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကအမျိုးအစားအထူးသံမဏိအပေါ်ယံပိုင်း၏ S20 စီးရီးအခမဲ့တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့, တဖြည်းဖြည်းလေထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သံမဏိကိုယ်ထည်၏မျက်နှာပြင်ကိုအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကွောငျ့, Ultra-ပါးလွှာ, အစိုင်အခဲအောက်ဆိုဒ်အလွှာ (အလွှာ passive) passive ပြည်နယ်ကအရမ်းတည်ငြိမ်ပြီးလဲလွယ်ကူသည်မဟုတ် လက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချေး၏ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်, ပယ်။ ထို့အပြင်ကြောင့်လည်းဒါပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အားသာချက်များ, ကြီးသောကုန်ကျစရိတ်ချွေတာနဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အဆင်ပြေသောဆီမီးခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း, solar လမ်းအလင်းဝင်ရိုးစွန်း, solar လမ်းအလင်းဘက်ထရီ, solar လမ်းအလင်းအားသာချက်များ, solar လမ်းအလင်း, solar လမ်းအလင်းဝင်ရိုးစွန်း, တရုတ်အတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူ
1. က Non-အပေါ်ယံပိုင်း, တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့
သံမဏိမျက်နှာပြင်တဖြည်းဖြည်းလေထု environment.The passive အလွှာအောက်မှာအလွန်သိပ်သည်း, Ultra-ပါးလွှာနှင့်ခိုင်ခံ့သောအောက်ဆိုဒ်အလွှာ (passive အလွှာ) ဖြစ်ပေါ်လာသောအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ချွတ်လဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်, အနည်းငယ်သာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချေးကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။
3.Weatherproof စွမ်းဆောင်ရည်သာမန်ရာသီဥတုဒါဏ်သံမဏိထက် သာ. ကောင်း၏
အသုံးပြုမှုအချိန်ကြာရှည်နှင့် passive အလွှာ၏သိပ်သည်းဆတို့၏စီးပွါးနှင့်အတူ, passive အလွှာများ၏ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်ချေးအချိန်ကြာရှည်နှင့်အတူခိုင်ခံ့စေ၏ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန, စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အကြွေးဝယ်ဝန်ကြီးဌာန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်အားလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန် galvanizing.And ၏စျေးကွက်တိုက်ခိုက်နေနေကြသည်စျေးနှုန်း year.Multi ခြေလှမ်း anticorrosion အစီအမံကိုရှောင်ရှားနေကြပါတယ်အားဖြင့်တစ်နှစ်မြင့်တက်နေသည်, ပစ္စည်းကအရမ်းရှားပါးအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, သံချေးကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်အပေါ်ပက်ဖြန်းခြင်းနှင့်, မဖယ်ရှား။
ပပျောက်ရေးနေ့ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု link ကို: sandblasting, ဖြီးအောက်ခြေကိုဆီဆေးသုတ်, သွပ်ရည်စိမ်
installation ကိုနည်းပညာထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မူလီဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဂဟေဆော်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့တပ်ဆင်ထား, တူညီတဲ့အရည်အသွေးမြင့်အာမခံချက်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : လမ်းမီးစီးရီး > နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်း
S20 စီးရီးသစ်အထူးသံမဏိ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆိုပါ Graphene Compound ပာလမ်းဆီမီးခွက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
graphene ကို LED လမ်းမီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစိမ်းရောင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေမီးအိမ်ပစ္စည်းများ နယူးလမ်းမီးပစ္စည်း Streert မီးအိမ် Post ကိုပစ္စည်း အစိမ်းရောင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေရွေ့ပြောင်း Lamps ဦးဆောင်ရှင်းလင်းခြင်းအလင်းများ